Sheekooyinka Galmada Gadaal
Voodoojinn Sheekooyinka galmada gadaal 12.09.2021 12.09.2021 Comments
Ka hadla dadka ku saabsan galmada dabada
Galmada dabada ugu jecel
Sida loo diyaariyo galmada dabada?
Dhammaan Galmada Habeenkii oo leh Doon weyn
Maxay niman u jecel yihiin galmada dabada?
Home Bulshada galmada Sheekooyinka galmada ay dumarku jecel yihiin in ay raga ka maqlaan? Sheekooyinka galmada ay dumarku jecel yihiin in ay raga ka maqlaan? Sunday, July 24, Bulshada , galmada Edit Bulsha:- Nolosha wanaagsan ee qoysku iyo jiritaankiisu waa mid u baahan daacadnimo, niyad wanaag iyo dhaqan wacan oo xilikasnimo ay ku jirto. Taasi oo laga doonayo in ay ku dhaqmaan labadda qof ee lamaanaha isu ah.
Hadii aan u daadagno nuxurka hadalkeena, sheeko noocee ah ayay gabadhaadu ka heshaa? Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay iyadu ka hesho sheekooyinka madadaalada iyo filimaanta musalsalka ah. Adiguna laga yaabaa inaad ka hesho wararka iyo dhacdooyinka dunida. Hadaba maadaama oo aad guri ku wada nooshiin, wakhtibadana wada qaadanaysaan kolay waa inay meesha timaadaa sheeko ka duwan tii usbuucii hore aad ka sheekaysay.
Taa micnaheedu waxaa weeye sheeko cusub ayaa lagaa rabaa. Sheekaysiga iyo faro ka ciyaarka u dhexeeya lamaanaha ayaa qaybwayn ka qaadata kobaca jacayl. Hadaba maxaa kula gudboon inaad ka taxadarto? Majecla dumarku inay maqlaan ninka oo ka sheekaynaaya hadii yaraantiisii mid ay saaxiib ahaayeen uu lagday ama yara sabaaxadeeyay. Dumarku had iyo jeer way kasoo horjeedaan astaamahan fulaynimada muujinaya in ninkoodu ku sifoobo. Dumarku intabadan majecla inay kaa maqlaan amaanta gabadh aad yaraantiinii xidhiidh wada lahaydeen.
Sida badanaa dhacda, ragu waxa uu diirada ku hayaa waxa ka dhacaaya aduunka iyo dunida muslimka. Waxaa iska dhacda in rag badini inta badan ay dumarkooda uga sheekeeyaan arimaha Falastiin, Ciraaq iyo Maraykankii inta laga laayay, Baakistaan iyo qaraxyada lala beegsanaayo iyo Afqaanistaan iyo NATO waxa kala haysta. Waa hadii uu yahay oday caalamka la socda ee. Hadii kalana waxaa laga yaabaa inuu ka sheekeeyo inay maanta reer hebel shir la yeesheen oo magtii badh laga daayay, mid yar oo la dakhray ay lacagtii baanta uqaadeen, reerkooda loo magacaabay wasiir, halka reer hebelna agaasime loo magacaabay.
Waxaa laga yaabaa inay haweenaydu sheekadan dhibsanayso isna aanu dhaadanayn. Waxa ay jeclaan lahayd in iyada nafteeda laga sheekeeyo; inay tahay qof labiska ku soo baxda, cuntaday karisay maanta inay tahay mid aan hore loo arag dhadhankeeda iyo damcadeeda. Hadii uu jiro shaadh ay sifiican u kaawiyadaysay iyo shaaha ay kariso mooyee shaah kale udhadhamin. Waxa ay jeceshahay in aad uga sheekayso waqtiyadii quruxda badnaa ee aad soo marteen bilawgii guurkiina, ka hadashaan hadii ay jiraan qorshayaal in aad dalxiis meel uun ugu baxaysaa.
Ninku waa In uu u sheego oo ku amaano haddii uu arko guriga oo nadiifa oo tilmaamo in ay inay gaari tahay. Raga intooda badani ku ma dadaalan inay gabadha farxadeeda joogteeyaan. Dhambaalkaa yar ayaa haweenayda ugu fadhiya macno wayn.
Halka kuwo kalakan ku guul daraystaan inuu xaaskiisa macaan, xabiibi, gacaliso ku yidhaa ama magaceeda oo saddexan ugu yeedho. Halka raga qaar ay kuba adagtay inay dumarkooda dhunkadaan, hadalkalooda fiicani haba joogee. Waxaad ogataan weji furnaanta,qosolka iyo faraxadda badan ee idin ka dhaxeysa in uu saldhig u yahay jacaylka dhabta ah ee waara.
Share on Facebook Share on Twitter Waxaa laga yaabaa inaanay jirin wax badan oo ah halka uu jiro hal galmo oo kala duwan, sida shaqooyinka Marquis de Sade. Dhammaan "meelo" wuxuu ka doorbidaa dabada. Waxaa laga yaabaa in ay farxad u tahay erayga "sadbaxnimada" ka yimid sababtoo ah cabsida noocan oo kale ah ee jinsiga, kaas oo si dhow ula dhexmuuqday heesaha sheekooyinka ee jilitaankiisa qalloocan.
U diyaargarowga gabadha ugu horreysa ee galmada Sida marka ay dhacdo siilka, jimicsiga ugu horeeya wuxuu u baahan yahay hab taxadar leh, maaddaama aragtida xun ee ilbiriqda ahi marwalba iska ilaalin karto rabitaanka farxada. Ha bilaabin diyaargarowga akhlaaqda adigoo eegaya filimada jilicsan. Haa, waxaa hubaal ah inaad arki doontid sida haweenku ay si fudud u aqbalaan hubka dagaalka ee lammaanaha ka soo galaya "albaabka madow".
Xataa xitaa waxa uu ku guuleystay in uu gaaro ugu sarraysa barwaaqo xaraash ah. Meelaha ka dambeeya waxaa jira diyaar gareyn, sababtoo ah ka hor inta aan la tuurin mid kasta oo haween ah ayaa lagu duubaa qashin iyadoo la isticmaalayo qadar badan oo saliid ah. Diyaarka maskaxeed ee saxda ah ee haweenta galmada dabada ah waa inay ka bilaabataa falanqaynta cabsida. Sidaas, waa maxay bikrado ay ka cabsi badan yihiin? Gabdho badan ayaa ku qoslaya fikradda ah inay sii joogi doonaan gabadha jacaylka ka dib markii uu sameeyay "shaqada wasakhda ah".
Si aad uga gudubto cabsidan, waxaad u baahan tahay inaad u sii dheeraato qotodheer. Qodobadu waa in malawadka uusan si dhakhso ah u bilaabmin ka dib markii giraanta ka soo baxa dibadda.
Waxaad haysataa cm oo kale oo ah sirfu gudaha ah - waa ku filan inaad nuugto sharafta ragga. Waa muruqyadan oo ka jawaab su'aasha, sababta dhalmada dabiiciga ah ayaa ugu faraxsan ragga. Ulajeeddooda dabiiciga ahi waa inay xajiyaan saxarada marka loo baahdo.
Haddii aanan ku qanacsaneyn, marka ugu horeysa waxaad isticmaali kartaa enema nadiifiya. Si kastaba ha noqotee, nidaamkani wuxuu u noqonayaa diyaarinta qasab ah ka hor inta aanad galmada dabiiciga ah gaar ahaan haddii aad inta badan ku dhaqmi doonto ma aha mid u qalantaa - waxaa jira khatar weyn oo ah dhaawicida qashinka ama khalkhalka microflora mindhicirka; isbedelka ragga.
Qaar waxay ka baqayaan in ninkani uu indhahiisa u jeedin doono indhahiisa, oo lagu daaweyn karo gabadh aad u xun. Xaqiiqdii, galmada dabada waxay ubaahan tahay la-hawlgalayaasha inay xoojiyaan jilicsanaanta iyo aaminaadda.
Mar labaad, tirtirso sawirada xusuusta filimyada porno, nin waa inuusan "jabin" adiga, raaxeysigiisu wuxuu ku jiraa foosha xoogan ee guska iyo socodka muruqyada isugeynaya. Waxaa macquul ah in dareemayaasha cusubi ay kugu soo dhaweynayaan oo ay ka buuxsami doonaan midba midka kale; xanuun.
Sidee gabadhu u diyaar garoobi kartaa galmada, haddii ay si yar u yareeyso fikirka xanuunka, waxaad u maleyneysaa. Oo waxaad noqon doontaa khalad. Dareenka xanuunku wuxuu tilmaamayaa in wax qaldan ay ku socdaan geeddi-socodka. Sida galmo kasta, shaygu waa inuu ku raaxaystaa , iyo labadaba.
Ka-joojinta cabsidaas, waxaad sii wadi kartaa marxaladda xigta - diyaarinta futada ee galmada. Habka ugu wanaagsan ee loogu diyaariyo shakhsi si aad xubin uga qaadato waa inaad is dejiso. Markaad la qabatey dhinaca nafsaaniga, u tag masawirka dabada: markii ugu horeysay ee aad la ciyaari kartid isaga oo kali ah, nasasho iyo dhageysiga dareenkaaga. Waqtigan, waxaad isticmaali kartaa ciyaaro gaar ah! Si aad uga takhalustid cabsida dareemo xanuun; Mustaqbalka, nidaankani u sheeg qofka aad wada nooshihiin.
U daa inuu futada ku rido fartaada, ka dib markaad kuusoo dhejisid candhuuf ama dufankaaga. Haddii tani aysan ku filneyn, had iyo jeer ku xafid tuubo leh saliida jelly ama saliidda miiska sariirta. Xusuusnow: futada waa in la qoyo oo la jilciyaa! Xirfadlayaasha lammaane-yahanka ah waxay marwalba si xamaasad leh ugu jawaabaan caressooyinkaas la ruxay.
Haddii ninku uusan maskax lahayn - isaga kalsooni ku kalsoonow; markaad nasto, weydii rafiiq inuu fartaada ku galo futada. Ha ahaado farta yar. Xasuusnow in futada badani ay u badan yihiin baahida dhaqdhaqaaqa wareega, halkii ay ka iman lahaayeen jajab xoog leh. Sii wad qaybtan tababarka illaa aad si fudud u qaadan karto suunka lamaanaha; Marxaladaha hore waxay qaadan karaan wax ka badan hal habeen, tani waa caadi. Markaad adigu rabto inaad dareentid xubin ka mid ah baaskiilka marinka dambe, marka fikraddani ay ku hogaaminayso oo aad haysato miyir-qabkaaga, kaliya markaa waa lagama-maarmaan inaad u gudubto galmada.
Sidee si habboon u diyaargaroobeysaa haweenada galmada, waxaad mar horeba ogtahay, sidaas mar kale, hubso inaad leedahay qaybo sax ah: Vaseline ama madow, jacayl naxariis leh, rabitaankiisa.
Xusuusnow, nin maahan inuu galo guska ilaa dhammaadka, markii ugu horeysayna wuxuu ku filnaan doonaa inuu bilaabo madaxiisa. Ha dhimanayso, waxaad maqli doontaa inaad dhegaysato dhamaanba dareenkaaga. Ka bilow jagada jilibka. Waxaa muhiim ah in ninku aanu kugu dhejin adag adigoo qabsanaya markii ugu horeysay , si aan macquul ahayn waxay u cabsi gelin kartaa.
U hubso inaad isticmaasho kondom! U diyaargarowga nin loogu talagalay galmada dabada waa in la yareeyo barashada cad. Ha ka baqin inaad sharaxdo rabitaankaaga oo ku raacso calaamadda aad ku codsaneyso haddii aad go'aansato inaad dib ugu noqotid wadada.
Gabdho badan ayaa ku qoslaya fikradda ah inay sii joogi doonaan gabadha jacaylka ka dib markii uu sameeyay "shaqada wasakhda ah". Si aad uga gudubto cabsidan, waxaad u baahan tahay inaad u sii dheeraato qotodheer. Qodobadu waa in malawadka uusan si dhakhso ah u bilaabmin ka dib markii giraanta ka soo baxa dibadda. Waxaad haysataa cm oo kale oo ah sirfu gudaha ah - waa ku filan inaad nuugto sharafta ragga. Waa muruqyadan oo ka jawaab su'aasha, sababta dhalmada dabiiciga ah ayaa ugu faraxsan ragga.
Ulajeeddooda dabiiciga ahi waa inay xajiyaan saxarada marka loo baahdo.
Haddii aanan ku qanacsaneyn, marka ugu horeysa waxaad isticmaali kartaa enema nadiifiya. Si kastaba ha noqotee, nidaamkani wuxuu u noqonayaa diyaarinta qasab ah ka hor inta aanad galmada dabiiciga ah gaar ahaan haddii aad inta badan ku dhaqmi doonto ma aha mid u qalantaa - waxaa jira khatar weyn oo ah dhaawicida qashinka ama khalkhalka microflora mindhicirka; isbedelka ragga. Qaar waxay ka baqayaan in ninkani uu indhahiisa u jeedin doono indhahiisa, oo lagu daaweyn karo gabadh aad u xun.
Xaqiiqdii, galmada dabada waxay ubaahan tahay la-hawlgalayaasha inay xoojiyaan jilicsanaanta iyo aaminaadda. Mar labaad, tirtirso sawirada xusuusta filimyada porno, nin waa inuusan "jabin" adiga, raaxeysigiisu wuxuu ku jiraa foosha xoogan ee guska iyo socodka muruqyada isugeynaya.
Waxaa macquul ah in dareemayaasha cusubi ay kugu soo dhaweynayaan oo ay ka buuxsami doonaan midba midka kale; xanuun. Sidee gabadhu u diyaar garoobi kartaa galmada, haddii ay si yar u yareeyso fikirka xanuunka, waxaad u maleyneysaa. Oo waxaad noqon doontaa khalad. Dareenka xanuunku wuxuu tilmaamayaa in wax qaldan ay ku socdaan geeddi-socodka.
Sida galmo kasta, shaygu waa inuu ku raaxaystaaiyo labadaba. Galmada cirridku waa qallooc iyo cilad aan caadi ahayn Galmada dabeeciga ah waxaa lagu aqbalaa dhaqanka galmada qarniyo badan.
Dhaqannada qaarkood, dumarku waxay ku heshiiyeen inay galmada la galaan lamaanahooda labadooda si ay u ilaaliyaan bikradnimadooda. Waa inaad go'aansatid naftaada dabiiciga ah iyo waxa aan ahayn. Haddii aad dareento inaad ka xun tahay fekerka galmada galmada - ha sameynin! Kaliya waxaad go'aamin kartaa nooca jinsiga ah ee aad sameyn karto.
Iyo bayaannada dadka ku jira xaaladdan gebi ahaanba waxba kuma laha. Galmada afka ayaa ku farxaysa oo keliya khaniisiinta Wakhti dheer waxaa dhab ahaan loo tixgeliyey ficil ahaan qaniisyo qaniiseed, inkastoo ay isticmaaleen lamaane heterosexual ah.
Waa hab kale oo loogu talagalay farxad galmo oo aan lahayn xiriir la leh jihada galmada. Dhammaanba, khaniisiinta waxay leeyihiin qaab dhismeed oo isku mid ah dadka kale oo dhan.
Qoraal noocan oo kale ah ma aha mid macno leh. Ogow habdhiska neeftaada Si aad si fiican u fahanto galmada dabada, waxaad u baahan tahay inaad wax dheeraad ah ka ogaatid anatomy ee futada iyo malawadkaaga. Isticmaal muraayad iyo iftiin fiican, fiiri dabadaada.
Inkasta oo ay u muuqato mid yar oo aad u cufan, waxay awood u leedahay in ay ku filan tahay - tusaale ahaan, faraha, vibrators ama guska wax kasta. Waxaad ogaan doontaa in maqaarkaaga agagaarka futada uu mugdi yahay, oo qarxan, oo aan lahayn timo, dhidid iyo qanjidhada xayawaanka.
Sida hoosta hoosta, futada waxaa ku jira unugyo badan oo xididada dareemayaasha, waana mid aad u nugul in la taabto lana fidiyo.
Qeybta sare ee futada waa meesha ka soo baxda malawadka. Maaha wax la yaab leh markii dhawr sano ka hor oo dhan tan waxaa loo tixgeliyaa in uu xumaaday heerka ugu sareeya.
Dabcan, haweenayda dabiiciga ahi waa mid ka mid ah goobaha xasaasiga ah, laakiin waa ka duwan tahay hoosta haweenka, waxay u baahan tahay in lagu daro dheecaan dheeraad ah. Xanuun ayaa la yareyn karaa iyadoo la adeegsanaayo jilciya gaar ah oo laga iibsado farmashiyaha, dukaamada jinsiga ama kareemka ilmaha caadiga ah. Iyo, laga yaabee, helitaanka ugu xun ee loogu talagalay dabacsanaanta madadaalada waxay noqon doontaa xaqiiqda ah in malawadka, sida meelo kale oo gudaha ah oo jidhka ah, uu la socdo microbes oo laga yaabo inay noqoto tijaabo lagu faafiyo cudurrada galmada.
Dhamaan waqtiyadaas waa la iska ilaalin karaa, adigoo isticmaalaya hababka hoose ee ilaalinta. Hase yeeshe, wax dhib ah ma jiraan qof kasta oo bedeli kara fursadda inuu dareemo sida muruqyada gudaha ee haweeney ay u qabsanayaan jirkooda, taxaddar ahaan qaabka loo isticmaalo kondoom.
Si gaar ah sukamish, sidoo kale, lagama yaabo in ay "ku dhegto" meelahan oo kale, sababtoo ah dammaanadda in lammaanuhu si habboon u diyaargaroobo naqshadeynta iyo ninku wuxuu jiidayaa "saaxiib" nadiif ah, waa yar yahay. Dhammaan kuwan, xitaa yar yar, laakiin aan fiicneyn, faahfaahinta waa la iska ilaalin karaa, ka dib talooyinka soo socda. Ka dibna dadka jecel waxay ku qanacsan yihiin quruxda galmada.
Xasuuso dhibaatooyinka. Xeerarka hoose ee nadaafadda ayaa iska ilaalin doona xaaladaha qallafsan, gaar ahaan gabdhaha aan dooneynin inay jecel yihiin in ay si lama filaan ah u heleen raadad ka samaysan beerkiisa. Ku saabsan sida ay suurtagal u tahay in la nadiifiyo malawadka, waxaa jira qoraallo badan oo internetka ah. Habka ugu caansan ee ku shaqeeya enema biyo diirran. Isku day inaad wax walba ku sameyso gacmahaaga - habka kale ma aha mid xun, laakiin aad iyo aad u yaab badan oo aan raaxo lahayn.
Qodobbada labaad waxay tahay inaad daryeesho muzhchinam. Daby ma keenaan dareenka xanuunka leh ee aadka u jecel, waxaa fiican in aad soo iibsato qaas ah gaar ah ka hor.
Xagga sare waxaan ku soo sheegnay meesha aad ka iibsan kartaa lubricants. Xaalad-dhaqameedka waa in la isticmaalo ugu yaraan kiriim joogto ah. Hadafka ugu dambeeya: ha ilaawin ilaalinta! Dabcan, haddii lamaane uu leeyahay rikoodh dheer oo adeeg ah, kalsooni buuxda iyo caafimaad xoog leh oo ku saabsan tilmaamayaasha caafimaadka, waxaad qaadan kartaa khatartaas. Dhammaan inta hartay waxaa si adag loogu talinayaa inay xiraan cinjirka. Xasuuso in laga reebo nolol aan fiicnayn oo dhibaatooyin yar ah, shuraakooyinku waxay awood u yeelanayaan inay si dhab ah u qiimeeyaan xiriirka ka dhaxeeya mid ka mid ah muujintooda iyo helitaanka qanacsanaanta jirka iyo kan ruuxeed.
Konek to card sme
Fafi numbers 1 to 49 meaning
thoughts on “Sheekooyinka galmada gadaal”
Blog del narco sonora
Voodoozshura on Sheekooyinka galmada gadaal
Copyright © 2021 Sheekooyinka galmada gadaal. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.